Izindaba - Ithimba Lokuklama
Ithimba labaklami abangochwepheshe, elinolwazi ekwakhiweni kwamata omnyango iminyaka engaphezu kwe-10. Kuhle ngezitayela ezahlukene, ngokuklama, izinto ezibonakalayo, i-multi-functional and creative design, izinqubo zokukhiqiza, ikhwalithi ehlangene nokusebenza, ukudala izitayela ezihlukahlukene, futhi imiklamo eyenziwe ngokwezifiso iyatholakala.
Sandise ithimba lethu lokuklama futhi manje sineqembu labaklami abaqeqeshiwe elizinikele ekuthuthukiseni imiklamo emisha ye-mat kanye ne-doormat ukuze sihlangabezane nezidingo zamakhasimende ahlukene.Sinemikhiqizo emisha ehlukene amakhasimende angakhetha kuyo yonke ikota.Futhi besilokhu sandisa imishini yethu yokukhiqiza kanye nomthamo, sengeze imishini eminingi emikhulu ukuhlangabezana nemikhiqizo ehlukene.Singakwazi ukuthuthukisa umklamo wethu wephethini ye-carpet, eyingqayizivele, inoveli, ethandwa ngamakhasimende ethu.Eminyakeni yamuva nje, siphinde sitshale emishinini emikhulu yokunyathelisa, singathuthukisa amaphethini ethu, ukuphrinta kwethu, ukukhiqiza kwethu, indawo eyodwa ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende.Ithimba eliqinile lokuklama, linokubhaliswa kwalo kwelungelo lobunikazi okuningi.Inqobo nje uma unemibono, singenza imikhiqizo ukuthi ihlangabezane nezidingo zakho.Nikeza owakho imibono kubaklami bethu ukuze uzenzele owakho umklamo.Uma nje usinika umdwebo noma umbono, umklami wethu uzodweba isithombe se-3D ukuze siqinisekiswe, ukuze uqonde ngokugcwele ukuthi umkhiqizo ufanele yini ukuvula isikhunta, noma y ungathola imininingwane engekho yomkhiqizo, ukuze uqhubeke ulungisa, futhi ekugcineni uklame umkhiqizo owanelisayo ngawo.
Njalo ngonyaka, abaklami bethu baya emibukisweni ehlukahlukene ukuze bacebise ukwakheka kwemikhiqizo yabo, baphinde babhekise emibukisweni yeminye imikhiqizo ukuze bathole ugqozi olungahlanganiswa nemikhiqizo yethu.Minyaka yonke amamodeli ethu amasha azoqinisekiswa ngokuqinile ngamakhasimende, kanye nontanga silingisa, silingiswa, singalokothi sidlule.Asesabi futhi ukulingiswa, ngoba sizoba nemiklamo engcono ngokuzayo.
Isikhathi sokuthumela: 13-09-21